The ntu oyi. Kedu ihe ọ bụ, olee otu esi kpụrụ ya na ihe bụ nsonazụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ bụrụ na ibi na mpaghara nwere udu mmiri oyi, n'ezie ị teta n'ụra n'ụtụtụ ụfọdụ, oyi akwa ọcha ice na-ekpuchi osisi niile. Akwa a, nke yiri ka obu nieve, a na-akpọ Ntu oyi. Ọ bụ ihe omimi nke imepụta obere kristal akpụrụ akpụ na-etolite ọnụ ọgụgụ kristal. Ha na-agbasa gburugburu ụgbọ ala, na windo, na osisi mgbe okpomọkụ dị oke ala n'abalị. Maka ntu oyi ka ọ na-etolite, ọ bụghị naanị na ọ ga-ezuru ịnwe obere okpomọkụ, mana ọnọdụ ndị ọzọ ga-ezute ka ọ mee.
Chọrọ ịma ihe ihe ndị achọrọ bụ na etu ntu siri hiwe? N’isiokwu a anyị ga-akọwara gị ihe niile n’ụzọ zuru ezu.
1 Igwe ikuku mmiri
2 Olee ntu oyi iche
3 Chọrọ ntu oyi na-etolite
4 Nsonaazụ ọjọọ
Igwe ikuku mmiri
Ikuku anyị na-ekuru abụghị naanị ngwakọta gas ndị ikuku oxygen na nitrogen na-akarị. E nwekwara iru mmiri ma ọ bụ gịnị bụ mmiri n’ọnọdụ alụlụ. Dị ka anyị si mara, saturation nke ikuku na iru mmiri na-adabere na ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku ikuku na gburugburu ebe obibi. Obere okpomọkụ anyị dị, ngwa ngwa ikuku jupụtara na iru mmiri. Nke a bụ ihe na - eme ma anyị rute n’ụgbọala n’oge udu mmiri, iku ume anyị na - eme ka windo kwusi.
Ihe na - eme ma ọ bụrụ na anyị abanye n'ọnọdụ a bụ na ikuku dị n'ime ụgbọ ala ahụ dị oyi, yabụ ọ bụrụ na anyị na - aga n'ihu na - ekute ikuku na iru mmiri, anyị ga - anagide ya ma ọ ga - emecha mechie. Iji wepu fogging site na windo, anyị ga-eji kpo oku. Ikuku na-ekpo ọkụ na-akwadokwu alụlụ mmiri na-enweghị condensing.
Agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị ka ihe na - emegide arụmụka niile, ikuku dị n’ọzara nwere alụlụ mmiri karịa ikuku dị na mpaghara ugwu snowy. Gịnị na-emezi? Ugboro, ikuku nke nwere okpomoku dị elu nwere ike ijide alụlụ mmiri na-enweghị ya.. A maara nke a dị ka igirigi. ma na-egosi okpomọkụ nke ikuku si na mmiri jupụta na iru mmiri na-amalite ịba ụba. Otu a ka alụlụ anyị na-ewepụta n’abalị ụgụrụ.
Olee ntu oyi iche
Ozugbo anyi matara izu nke ikuku dị na iru mmiri, anyị nwere ike ịghọta etu ntu oyi siri dị. Ọfọn, ebe ọ bụ na ikuku anyị na-eku ume nwere mmiri mmiri, ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ pere mpe, ikuku mmiri agaghị eme ka ọ zuo oke, ọ ga-aghọ steeti siri ike. Ka ntu oyi wepụta, aghaghi inwe okpomoku di ala karie izu ike ikuku.
Mgbe abalị dara, anyanwụ na-akwụsị inye ikuku ọkụ na ikuku na-amalite ịjụ oyi ngwa ngwa. Coolwa na-ajụ oyi ọbụna karịa ikuku. Ọ bụrụ na ikuku adịghị, ikuku na-ajụkwa oyi. Ikuku nke na-ajụ oyi karịa, nwere ntụpọ, ya mere ọ na-agbadata n'elu ala. N'aka nke ọzọ, ikuku na-ekpo ọkụ ga-anọgide na ebe dị elu karịa elu, ebe ọ bụ na ọ pere mpe.
Mgbe igwe ikuku oyi na-agbadata n'elu, ọnọdụ okpomọkụ ga-agbadata n'ihu n'ihi mmetụta oyi n'etiti ikuku ikuku na ala oyi. Nke a ga - eme ka ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa ebe iru mmiri na - ejupụta ikuku, ya mere alụlụ mmiri na-erugharị n’ụra mmiri. Ọ bụrụ na ihere okpomọkụ bụ ihe na-erughị 0 ogo na e nweghị ifufe ibibi na kwụsie ike, na mmiri ụmụ irighiri mmiri edebe na elu dika akwukwo osisi, windo ugbo ala, wdg. Ha ga-aghọ kristal ice.
Otu a ka otutu oyi si aputa na abali oyi.
Chọrọ ntu oyi na-etolite
Dị ka anyị hụworo, anyị kwesịrị ikuku ka ọ dị n'okpuru ogo zero, na-enweghị ikuku yana ka ikuku wee jupụta na iru mmiri. N'ebe ugwu ikuku dị nkụ, ị gaghị ahụ ntu oyi ka ọ na-etolite ọ bụrụgodị na ọnọdụ okpomọkụ dị -20 ogo ma ọ bụ obere. Eziokwu ahụ bụ na mmiri na-agba agba ruo ogo efu abụghị eziokwu kpamkpam. A kụziiri anyị kemgbe anyị bụ nwata na ebe mmiri oyi dị mmiri bụ ogo efu, mana nke a abụghị otu a ma ọlị.
Mmiri mmiri na-enwekarị adịghị ọcha dị ka uzuzu, ntụpọ nke ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke na-arụ ọrụ dị ka ntọala maka odide hygroscopic. Nke a pụtara na ihe ndị a na-arụ ọrụ dị ka ntọala maka ịmepụta mmiri mmiri ma ọ bụ, na nke a, kristal ice. Ọ bụrụ na mmiri dị ọcha kpamkpam, na-enweghị odide ọ bụla, okpomọkụ nke ogo -42 ga-adị mkpa maka mmiri ịgbanwe site na mmiri mmiri gaa na ọnọdụ siri ike.
Nke a bụkwa otu n’ime ihe kpatara na ụfọdụ ebe nwere ntụ ntụ dị elu nke ikuku na-enwe oke mmiri ozuzo siri ike ma na-atụghị anya ya. Nke a bụ n'ihi na e nwere elu ịta nke odide nuclei akpụ ndị igwe ojii na tụlee mmiri na-akpụ tupu precipitations.
A pụkwara ịchọta ntọala ndị a dị n'elu ebe anyị kpọtụrụ aha dịka ụgbọ ala, iko ma ọ bụ mmiri nke dị Mbupu site na gas mgbanwe osisi. Elu nke osisi nwekwara ike inwe ntụ nke uzuzu, ájá, wdg. Nke ahụ mere dị ka ntọala dị omimi maka ịmepụta kristal ice.
Ntu oyi n'onwe ya adịghị ize ndụ dabere na elu ebe a na-emepụta ya. Ọ bụrụ na anyị nwere ntu oyi na korota ọ nwere ike ibute ihe mberede okporo ụzọ n'ihi mmegharị na-adịghị mma nke wiil ndị ahụ na ala na skid na-atụghị anya ya. N'akụkụ aka nke ọzọ, enwere otutu osisi akuku nke anaghi anabata ntu oyi na ntu oyi. N'ime ụdị ọnọdụ ndị a, enwere ike imetụta ihe ubi nke ukwuu.
Maka akụkụ ndị ọzọ niile, ntu oyi anaghị enyekarị nsogbu. Nanị na ọ na - eme ka mmetụta nke oyi dị.
Enwere m olileanya na ozi a na-enyere gị aka ịmụtakwu banyere ntu oyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ntu oyi